Hesekiel 37: Nea Yuda ne Efraim nnua no kyerɛ
Hwehwɛ Ahenni no, na Ɛnyɛ Nneɛma
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ ‘Yɛkɔ so Wɛn’
“Nsuro. Mɛboa Wo”
Momma Yɛnkyerɛ Onyankopɔn Adom Ho Anisɔ
Momma Yɛnka Adom Ho Asɛmpa No
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 2016
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Angolan Sign Language Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mixe Mongolian Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nnua mmienu a wɔka boom a ɛho asɛm wɔ Hesekiel ti 37 no kyerɛ sɛn?
Yehowa nam Hesekiel so hyɛɛ Israelfo no bɔ sɛ, sɛ wɔkɔ Bɔhyɛ Asase no so bio a, wɔbɛka abom asan ayɛ ɔman baako. Saa nkɔmhyɛ no nso kyerɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo bɛyɛ baako wɔ nna a edi akyiri yi mu.
Yehowa ka kyerɛɛ odiyifo Hesekiel sɛ ɔnkyerɛw nnua mmienu so. Ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnkyerɛw baako so sɛ, “Yuda ne Israelfo a wɔka ne ho no dea.” Nea ɛka ho no nso, ɔnkyerɛw so sɛ, “Yosef dea, Efraim dua, ne Israel fie a wɔka ne ho no nyinaa.” Ná ɛsɛ sɛ Hesekiel ka nnua mmienu no bom ma ɛyɛ baako wɔ ne nsam.—Hes. 37:15-17.
Edin “Efraim” no gyina hɔ ma dɛn? Efraim na na ɛyɛ abusuakuw titiriw wɔ mmusuakuw du ahemman a na ɛwɔ atifi fam no mu. Yeroboam a ɔyɛ mmusuakuw du ahemman no hene a odi kan no, ná ofi Efraim abusua mu. (Deut. 33:13, 17; 1 Ahe. 11:26) Yosef ba Efraim asefo mu na na saa abusuakuw no fi. (Num. 1:32, 33) Yosef nyaa nhyira soronko fii n’agya Yakob hɔ. Enti na ɛfata sɛ dua a wɔde gyinaa hɔ maa mmusuakuw du ahemman no, wɔfrɛ no “Efraim dua.” Bere a Hesekiel kyerɛw nnua mmienu yi ho asɛm no, na mmusuakuw du ahemman no kɔ nkoasom mu dedaadaw. Asiriafo faa wɔn nnommum afe 740 ansa na Kristo reba. (2 Ahe. 17:6) Babilon Ahemman no na etuu Asiria Ahemman no gui. Enti bere a Hesekiel reka nnua mmienu no ho asɛm no, na Israel mmusuakuw no mufo dodow no ara abɔ ahwete Babilon Ahemman no mu.
Afe 607 ansa na Kristo reba no, wɔde mmusuakuw mmienu a ɛwɔ anafo fam no kɔɔ nkoasom mu wɔ Babilon. Ebia wɔde atifi fam ahemman no mufo biara a na aka wɔ asase no so kaa wɔn ho kɔe. Ahemfo a wodii mmusuakuw mmienu no so no, na wofi Yuda abusua mu. Ná asɔfo no nso te Yuda ahemman no mu, efisɛ na wɔsom wɔ Yerusalem asɔrefie hɔ. (2 Be. 11:13, 14; 34:30) Enti ɛfata sɛ wɔde “Yuda” dua no gyinaa hɔ maa mmusuakuw mmienu no.
Bere bɛn na wɔkaa nnua mmienu no boom? Ɛyɛ bere a Israelfo no san kɔɔ Yerusalem kosii asɔrefie no bio afe 537 ansa na Kristo reba. Mmusuakuw du ahemman no ne mmusuakuw mmienu ahemman no mufo bi fii nkoasom mu san kɔɔ wɔn asase so. Saa bere yi de, na mpaapaemu biara nni Israelfo no mu. (Hes. 37:21, 22) Israelfo de baakoyɛ som Yehowa bio. Odiyifo Yesaia ne odiyifo Yeremia nso hyɛɛ saa nkabom yi ho nkɔm.—Yes. 11:12, 13; Yer. 31:1, 6, 31.
Nokware som ho asɛm a ɛho hia bɛn na saa nkɔmhyɛ yi ma yehu? Ɛno ni: Yehowa bɛma n’asomfo ‘ayɛ biako.’ (Hes. 37:18, 19) Yemmisa sɛ, baakoyɛ a wɔhyɛɛ ho nkɔm no abam wɔ yɛn bere yi so anaa? Yiw. Nkɔmhyɛ no fii ase baa mu afe 1919. Saa bere no, Onyankopɔn nkurɔfo de nkakrankakra totoo nneɛma, na wɔsan yɛɛ baako bio. Satan yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛpaapae Onyankopɔn nkurɔfo mu, nanso ankosi hwee.
Saa bere no, na wɔn a wɔasan ayɛ baako no mu dodow no ara wɔ anidaso sɛ wɔne Yesu bɛyɛ ahemfo ne asɔfo wɔ soro. (Adi. 20:6) Ná wɔte sɛ dua a egyina hɔ ma Yuda no. Nanso bere bi akyi no, wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no bebree bɛkaa honhom fam Yudafo no ho. (Sak. 8:23) Ná wɔte sɛ dua a egyina hɔ ma Yosef no, na na wonni anidaso biara sɛ wɔne Kristo bedi ade.
Saa akuw mmienu yi aka abom sɛ Yehowa nkurɔfo a wɔhyɛ Ɔhene baako, Yesu Kristo ase. Wɔka Yesu ho asɛm wɔ nkɔmhyɛ mu sɛ “m’akoa Dawid.” (Hes. 37:24, 25) Yesu bɔɔ mpae sɛ n’akyidifo nyinaa ‘nyɛ baako, sɛnea n’Agya no wɔ ne mu na ɔno nso wɔ n’Agya mu no.’ * (Yoh. 17:20, 21) Bio nso, Yesu hyɛɛ nkɔm sɛ n’akyidifo a wɔasra wɔn, kuw ketewa no, ne “nguan foforo” no bɛyɛ baako na wɔanya “ɔhwɛfo biako.” (Yoh. 10:16) Sɛnea Yesu kae no, ɛnnɛ Yehowa nkurɔfo nyinaa ayɛ baako. Wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro ne wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no abom resom Yehowa!
^ nky. 6 Yesu kaa nna a edi akyiri yi ho sɛnkyerɛnne ho asɛm, na ɔmaa n’asuafo no mfatoho pii. Ɛyɛ anigye sɛ, ɔkaa ne nsɛm no nnidiso, nnidiso. Odii kan kaa “akoa nokwafo ne ɔbadwemma,” anaa anuanom kakraa bi a wɔasra wɔn a wobedi n’akyidifo anim no ho asɛm. (Mat. 24:45-47) Ɛno akyi no, wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro nyinaa, ɔmaa mfatoho bi a ɛfa wɔn ho. (Mat. 25:1-30) Awiei koraa no, ɔkaa wɔn a wɔbɛboa Kristo nuanom no na wɔatena ase daa wɔ asase so no ho asɛm. (Mat. 25:31-46) Saa ara na bere a Hesekiel nkɔmhyɛ no fii ase sɛ ɛreba mu wɔ yɛn bere yi so no, edii kan kaa wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro no ho asɛm. Ɛwom, wɔntaa mfa mmusuakuw du no nnyina hɔ mma wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no. Nanso, nkɔmhyɛ no ma yehu nkabom a ɛwɔ wɔn a wɔbɛtena asase so ne wɔn a wɔbɛkɔ soro no ntam.
Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—July 2016
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2016
Nsɛmmisa A Efi Akenkanfo Hɔ—July 2018
Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—April 2018
Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—March 2018